Fictorum: iyo RPG ine yakawanda yekuita uye inoparadza nharaunda | Linux Vakapindwa muropa
Ino haisi nguva yekutanga yatakataura nezvayo Fictorum Mune ino LxA blog, iri RPG vhidhiyo mutambo uine yakawanda yekuita uye chimwe chinhu chisingawanzo kuwanikwa mune dzakawanda vhidhiyo mitambo, inova kuti ine inoparadza nharaunda panguva yehondo. Vagadziri vayo ndivo vanogadzira maScraping Bottom Games, chidzidzo icho chave kuchitaura kubvira gore rapfuura kuti chaive kuronga vhezheni yeLinux uye zvinoita sekunge isu vedu vane distros vanogona kunyemwerera, sezvo izvi zvaitika izvozvi.
Zvino zvirimo zveLinux zvakaratidzirwa nguva pfupi yadarika, iri nhau huru, kwete chete runyerekupe, asi isu takakwanisa kuona mifananidzo. Kuongorora iyo SteamDB dhatabhesi inoratidza kuti ichokwadi, kana zvakare NuSuey / TuxDB. Kana isu tikadzokorora ruzhinji nzira nzira yezvidzidzo zvinoita sekunge vanga vaine mamwe matambudziko neiyo Linux vhezheni, asi vakazvigadzirisa pasina kunonoka uye zvinoita sekunge iyo vhezheni ichatangisa iyi inovimbisa yevhidhiyo mutambo zvakare weLinux vakapindwa muropa.
Iwe unogona kutevera dzimwe nhau uye uone kana ichigona kutorwa pasi muzvitoro Chitoro Chakaderera uye Valve Steamsezvo ndipo painowanikwa. Kune avo vasingayeuke kuti mutambo wevhidhiyo uyu ndewei kubvira chiziviso chekupedzisira chatakaita pa blog, inyaya inokunyudza iwe mune hunhu uyo ​​murimi anogumburwa nemasimba emashiripiti kurwisa vavengi. Nemasimba aya, humambo hunowedzera hunofanira kudzikiswa, kukunda madanho akasiyana uye gumi nevapari vemhosva vanoda kutsiva.
Iwe unokwanisa kuwana masimba emashiripiti risingagumi uye iwe uchafanirwa kugona ivo uye shandisa iyi yemashiripiti arsenal kuti ugone kunyatso kusunungura kurwisa kuti vakunde zvipingamupinyi zvese. Mepu yaunofamba inonakidza kwazvo, nekumwe kushongedzwa kwakanaka kunogona kuputswa sezvatakataura, nekuti zvivakwa zvese nezvinhu zvaunowana zvine chimiro chinogona kuputswa, chimwe chinhu chisingaitike mumitambo yese. semuenzaniso, mune vazhinji vanopfura tinogona kupfura kana kukanda mhando dzese dzekuputika kumadziro kana zvivakwa uye ivo havatambure chero kukuvara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Fictorum: RPG ine zviito zvakawanda uye nharaunda inoparadza
vhuraSUSE Tumbleweed yatove neLinux kernel rutsigiro 4.18